Byron Radcliffe - Sinaanta Helitaanka Caalamiga
Madaxweynaha & Maamulaha, United States
Byron Radcliffe, Madaxweynaha iyo Maareeyaha EAI, wuxuu adeegsanayaa khibraddiisa ballaaran ee qaybaha bulshada iyo kuwa gaarka ah ee horumarinta caalamiga ah si loo dhiso buundooyin u dhexeeya daneeyayaasha kaladuwan ee warshadaha. Byron wuxuu soo jiidanayaa 30 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan horumarka caalamiga ah iyo maalgelinta si uu u wado koboc cusub. Khibraddiisa hoggaamiye fulineed waxaa ka mid ah hoggaanka maamulka shirkadda, qorsheynta ganacsiga istiraatiijiyadeed, maalgelinta, iyo waaxaha u hoggaansan. Wuxuu si firfircoon ugu lug leeyahay hirgelinta mashruuca adduunka oo dhan wuxuuna mas'uul ka ahaa kormeerka xafiisyada gobollada ee Afrika, Aasiya, iyo Latin America, wuxuuna khibrad u leeyahay hogaaminta bulshada rayidka ah, waxbarashada, caafimaadka, tamarta, gaadiidka, iyo barnaamijyada difaaca.
Byron waa lataliye xiise leh iyo af hayeenka horumarka caalamiga sida lagu muujiyey kaalintiisa firfircoon ee ururada horumarinta caalamiga ah. Muddadiisu ahayd 16 sano ee uu ku jiray Golaha Washington, DC Cutubka Bulshada ee Horumarinta Caalamiga ah wuxuu ku dhammaaday muddo afar sano ah oo ah Guddoomiye. Wuxuu hadda ka shaqeeyaa Golaha La-talinta Humentum ee Dowladda waxaana dhawaan loo doortay Golaha Agaasimayaasha ee MAG America. Waa nin ku xeel dheer cilmiga iyo kahadalka doodaha ee kahadla Mareykanka iyo shirarka caalamiga ah ee kusaabsan arimaha laxiriira Meelaha kala duwan ee horumarka caalamiga ah.
Byron waxa uu shahaadada Masterka ka qaataa arrimaha caalamiga ah jaamacadda Washington iyo shahaadada koowaad ee jaamacadda ee maaliyadda iyo dhaqaalaha Jaamacadda Central Missouri State University. Si aad ula xiriirto Byron Radcliffe fadlan iimayl ugu soo dir cinwaanka adillingham@equalaccess.org.